पारिवारिक तनावमा हुनुहुन्छ ? यसरी समाधान गर्नुस् « News of Nepal
पारिवारिक तनावमा हुनुहुन्छ ? यसरी समाधान गर्नुस्
पछिल्लो समय मानिसमा तनावको वृद्धि भएको छ । कोभिड–१९ का कारण सिर्जित परिस्थितिका कारण कतिपयलाई मानसिक तनाव थपिएको छ ।
व्यपार व्यवसाय तहसनहस भएको छ, कार्यालयहरु बन्द हुन पुगेका छन्, कतिपयले रोजगारी गुमाएका छन्, विद्यालयहरु बन्द छन् छोराछोरीको भविष्य अन्यौलग्रस्त छ जसका कारण मानिसहरु थप तनावमा परेका छन् ।
त्यसमा पनि लकडाउन र कोरोनाका कारण मानिसहरु घरभित्रै रहँदा पारिवारिक तनाव पनि थपिएको छ ।
अफिसमा भोग्नपरिरहेको तनाव सहज रुपमा कम गर्न सकिन्छ । तर पारिवारिक तनाव एक यस्तो समस्या हो जसको व्यवस्थापन गर्न त्यति सजिलो छैन ।
अफिसको तनाव कामको चाप वा अन्य कारणले उत्पन्न हुने हुँदा त्यसलाई केही सहज रुपमा समाधान गर्न सकिन्छ । तर परिवारका कारण उत्पन्न भएको तनाव व्यक्तिलाई मानसिक रुपमा बिरामी बनाइदिन्छ ।
किन हुन्छ पारिवारिक तनाव
कसरी गर्ने कम
पारिवारिक बेमेलको अवस्था आउनु अस्वभाविक होइन । कहिले आर्थिक कारणले त कहिले अन्य कारणले तनाव आउने गर्छ । त्यसकारण तपाईले परिवारका सदस्यहरुसँग खुलस्त कुरा गर्ने गर्नुहोस् वा समस्याहरुबारे प्रस्ट पार्नुहोस् ।
संयुक्त परिवार वा पति पत्नी, बुवा आमा, दाजूभाइ, बुहारी, भाउजु लगायतका परिवारका सदस्यहरुबीच पारिवारिक बैठकहरुको आयोजना गर्दा पारिवारिक समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ । समस्याहरुका बारेमा उक्त छलफलमा स्पस्ट कुरा राख्ने र समाधानको विषयमा पनि छलफल गर्दा पारिवारिक रुपमा हुने तनाव कम हुन जान्छ ।
सासू बुहारी, दाजूभाइ, देउरानी जेठानीबीच बेमेल हुँदा सामान्यतया नेपाली समाजमा पारिवारिक समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन् ।